buugaagta caruurta ee ku saabsan yoga | Apg29
Yoga qaadataa dugsiga iyo xanaanada.
Laakiin waxa hadda dhacaya? Well, yoga ku xidhan yahay Hinduism, waxaa laga yaabaa in si xor ah ku dhaqma, labadaba xannaanooyinka iyo dugsiyada!
Soo Bandhigida Yoga ee caruurta Swedish ee xanaanooyinka iyo dugsiyada. Waa waqti ilaa hadlo!
Waxaan hadda wax ku arkaa isbeddel weyn oo ku barbaarinta iyo dugsiga. Dugsiyada dalka Iswiidan hore qayb ka mid ah dabeecadda a Christian, heeso ammaan ah iyo caabuddaan subax lahaa.
Markaasaa waxaa u timid waqti marka dugsiyada waxay ahaayeen free of xubno Christian. Ka dib markii this hadda ayaa sawirka mar beddelay, sida barbaarinta carruurta iyo dugsiga hadda la furay, waayo, yoga.
Waa siyaasiyiinta sare iyo maamulka dugsiga ku adkeeyay sida ay muhiim u tahay in dugsiga in ay diin ahaan dhexdhexaad ah. No Christian ama saameyn diinta kasta oo kale ee dhici doona.
ugu dambeeyay waxa ay tahay in dowladda ka soo baxay oo u balan qaaday in dugsiyada mar dambe loo ogolaan doonin. ujeedooyinka soo jeedinta Tani si ay u joojiyaan in carruurta dugsiga loo bandhigi saamayn diinta.
Taasi hadda ogolaatay this iyo ayaa sheegay in aysan ahayn mid ku saabsan diinta, shows kaliya sida diin jaahil ama arinku aad tahay. fi The NNS cudurdaar uma aqbali karo sii daayo yoga ee si xor ah u kids.
Waxaan hore ee ah waxyaabaha ertal fl tusay xiriir si Hinduism. Halkan ma NNS fi bannaan inuu faahfaahin on this, laakiin waxaan rabnaa in la tilmaamo in xaqiiqda ah in yoga leedahay meel dhexe ee Hinduism, ma sharxi iska kartaa. Erayga "yoga" fiican loo tarjumi karaa sida "badbaado". Sayidka ah fikradaha diineed oo cad.
waxaa sidoo kale lagu xusay karaa in midda ugu baahsanaan badan oo dhan, Qorniinka oo Hindu ee dunida reer galbeedka waa Bhagavadgita ah. Buugani wuxuu soo bandhigayaa ilaah Hindu ah Krishna sayidkiisa yoga ah,. la xidhiidha Hinduism noqon kartaa cad? Xitaa maamulka waxbarashada ee waa in uu si this ogaato.
Ma u maleeyeen in dugsiyada iyo barbaarinta carruurta waxay noqon doontaa meel advertising for yoga? Markaas waa in aad sidoo kale foomamka kale ee diinta iyo daliilka lahayn meel la mid ah in yoga leedahay.
Waayo, qaar ka mid ah, tani waa nooc ka mid ah saamaynta, taas oo xiiso in yoga ka da'da hore. xiisaha Tani waxay markaas la soo saari karaa in ay iska diiwaan koorsooyinka la rabbeeyey, kuwaas oo lacag weyn ka xiisaha yoga toosay.
Waxaa loo arkaa intaan an waxba galabsan ee yoga for yar, ka dibna isku beddeli karaa foomka ugu awooda badan ee yoga, kundaliniyogan. fi The NNS xaalado badan halkaas oo ay dadku aad bay u xanuunsaday markii barbarta foomkan of yoga. Wixii macluumaad dheeraad ah ka eeg: http://kundalini.se
Ma Hey'adda mas'uulka ka ah jidaynayey yoga loogu talagalay carruurta, kaas oo noqon kara albaab ah wax ugu dambeyntii raadad u ah cudurka dhimirka?
article waa ka magazine olol tirooyinka laba sano 2018th